N'ogbe Multivitamin Ọgwụ Manufacturer na Supplier | Junyu Pharm
Ọgwụgwọ na mgbochi nke ụkọ vitamin na anụ ụlọ, EgGrowth disturbances, adịghị ike nke ụmụ amụrụ ọhụrụ, neonatal anaemia, anya ọgba aghara, nsia nsogbu, convalescence, anorexla, noninfection omumu nsogbu, rachitis, ike adịghị ike, muscular tremor na myocardial ọdịda na ihe isi ike na na-eku ume ọrịa ikpuru.
Nwere kwa ml:
Vitamin A 3 .. 3000 IU
Vitamin E 4 ..4 mg
Vitamin B1 …………………… 10mg
Vitamin B2 …………………… .1 mg
Vitamin C .1 ..1 mg
Nicotinamide ……………. 12.5mg
Ehi, ịnyịnya, atụrụ, ewu na ezì; 1ml kwa 1kg nke ndụ ahụ dị site na SC, IM ma ọ bụ ngwa ngwa IV. Injections maka ụbọchị 5.
Wepụ ọgwụ niile n'ebe ụmụaka nọ
Chekwaa n'etiti + 2 ℃ na +15 ℃, ma chebe ya na ìhè
Mbukota nwere ike dị ka ahịa ina
Ebumnuche anyị ga-abụ ịnye ngwaahịa dị elu na ngwọta na ebubo asọmpi, yana nkwado kachasị elu nye ndị ahịa gburugburu ụwa. Anyị abụrụla ISO9001, CE, na GS gbaara ma gbasosie ike na nkọwapụta nke njirimara ha maka ọbịbịa Ọgwụ Ọhụrụ China China Veterinary Medicine Gentamycin Injection 100ml Nke 5, ndị ọkachamara anyị nwere mgbagwoju anya ga-eji obi ha niile na ọrụ gị. Anyị ji obi anyị niile na-anabata gị ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị na ụlọ ọrụ wee nye anyị ajụjụ gị.
Ọbịbịa ọhụrụ nke China China Gentamycin, Verterinary, Ọzọkwa, ndị ọkachamara maara nke ọma na ndị nwere ọgụgụ isi akwadola anyị, ndị nwere nnukwu ọrụ na ngalaba ha. Ndị ọkachamara a na-arụkọ ọrụ ọnụ na ibe ha iji nye ndị ahịa anyị ọtụtụ ihe dị irè.
Anyị ga-arara onwe anyị nye inye ndị na-azụ ahịa anyị nwere ezigbo obi ụtọ maka azịza OEM / ODM China Vitamin C Ọgwụ 500mg5ml Nkà Mmụta Ọgwụ Mmadụ, Ourlọ ọrụ anyị na-akwado obere azụmaahịa jikọtara site na eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ iji nọgide na-enwe mmekọrịta ogologo oge na anyị ndị na-azụ ahịa.
Tụkwasịnụ OEM / ODM China Vitamin C Ọgwụ 500mg5ml, Vitamin C, Anyị na-na na-esi ọnwụ mgbe niile na mmalite nke ihe ngwọta, nọrọ ezigbo ego na mmadụ na oru na nkà na ụzụ upgrading, na ikwado mmepụta mma, na-ezute chọrọ nke atụmanya si mba niile na mpaghara .
Nke gara aga: Ivermectin Ọgwụ
Osote: Oxytetracycline ogwu ogbugba
Analgin Ọgwụ 50%